Famolavolana drafitra fanaraha-maso | Reef Resilience
Ny fanaraha-maso dia natao hamantarana na handrefesana ny fiovan'ny zavamiaina haran-dranomasina rehefa mandeha ny fotoana. Ny dingana dimy lehibe amin'ny drafitra fanaraha-maso dia ahitana:
1: tanjona kendrena:
Ny mpitantana dia tokony manapa-kevitra momba izay fampahalalana takiana hanohanana ny tanjon'izy ireo amin'ny fitantanana. Ny tanjon'ny drafitra fanaraha-maso dia hitarika ny fisafidianana ireo miovaova izay tokony hampidirina ao.
2: Fisafidianana ireo miovaova
Ny drafitra fanaraha-maso mahomby indrindra dia mifantoka amin'ny variables izay manondro fironana amin'ny toetran'ny rafitra izay mahaliana ny mpitantana ary miteraka valiny amin'ny fitantanana. Mety hifantoka amin'izany ireo singa voajanahary (oh: ny isan'ny mponina, ny karazany, ny vondron'olona, ​​ny kalitaon'ny rano) ary ny fizotrany (oh: fandraisana mpiasa, onjan-dranomasina, taham-pitomboana).
3: Mametraka ny tokonam-baravarana sy ny Trigger
Ny valin'ny programa fanaraha-maso dia tokony ampitahaina amin'ny soatoavina maneho ny tokonam-piahiahy ara-tontolo iainana na ara-tsosialy. Rehefa manondro ny valin'ny fanaraha-maso fa nahatratra ny tokonam-baravarana, dia mety hipoitra ny valiny fitantanana mety. Ny tokonam-baravarana dia mety ho tsotra toy ny fisian / tsy fisian'ny miovaova na koa misy fatra hafa misy fiantraikany.
4: mifidy fomba fanaraha-maso
Ireo fomba nofidina dia tokony hanome fanombanana matanjaka sy azo itokisana an'ireo miovaova voafantina sy tokony mifanaraka amin'ny fahaiza-manao, ny famerana ny loharano ary ny toe-pahasalaman'ny olona sy ny andrim-panjakana manao ny fanaraha-maso.
5: manapa-kevitra amin'ny famolavolana santionany
Ny karazana sy ny toerana misy ireo tranonkala nofidina ho an'ny programa fanaraha-maso dia ho faritan'ny tanjon'ny programa fanaraha-maso sy ny loharanom-pahalalana azo.
Aorian'ny famolavolana drafitra mifototra amin'ireo dingana etsy ambony, dia zava-dehibe ny mandinika ireo loharano sy filàna ilaina mba hampiharana ny drafitra fanaraha-maso anisan'izany ny fahaizana ara-bola, ara-teknika, ary ny fahaiza-manao. Ny drafitra fanaraha-maso dia fitaovana iray manan-danja ary afaka manampy ny mpitsabo iray hieritreritra amin'ny endrika samihafa amin'ny fanaraha-maso izay mety tsy ho noheverina ho toy ny famolavolana programa fanaraha-maso maharitra.
Ireo mpikaroka manisy marika vato harana ao amin'ny Palmyra Atoll. Sary © Tim Calver
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reef Monitoring Manual ho an'ny Karaiba sy Western Atlantic manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaraha-maso ireo faritra voaaro amin'ny haran-dranomasina: torolàlana azo ampiharina amin'ny fomba hanohanana ny fanaraha-maso mahomby amin'ny MPAmanokatra fisie PDF